I-LORE OLYMPUS WEBCOMIC IBUYISA UMOTHUKO, IVUMELA UKUBA IGUQULWE - ABANIKELI
Hlela Amaphepha Ewebhu
I-Lore Olympus Webcomic kaRachel Smythe ibuyisa umothuko kwaye ivumela ukuba iguqulwe
[Umxholo Isilumkiso: Ukuxelwa nokuxhatshazwa.]
Umothuko uhlala usetyenziswa njengesixhobo esibalisayo. Phantse kuzo zonke iintlobo zohlobo kunye naphakathi, ilahleko, iintlungu zentliziyo, ukuphazamiseka kwengqondo, kunye nokuxhatshazwa yimililo esetyenziswa ngabadali ukwenza amaqhawe alungele umlo kunye nelungileyo. (Angaba phi uBatman ngaphandle kokuphulukana nabazali bakhe?) Ithuba lokonzakala ukuze liguquke libe ngamandla omntu lihlala likho kumabali athandwayo, kodwa kunqabile ukuba la mabali enze ingxelo ngenkqubo eyenzeka ngayo. Kwimeko yakhe yeWEBTOON yokuhlekisa ULore Olympus , Umdali uRachel Smythe unikezela ngenye yezona ngcamango ezinengqiqo malunga nokuxhatshazwa, ukuxhatshazwa, kunye nokubuyiselwa kwamandla omntu ngokucinga kwakhona ngenye yeendaba ezidumileyo zokubamba.
ULore Olympus yimbali yeli xesha yentsomi eyaziwayo yamaGrike yokuthinjwa kwePerphone, uthixokazi wasentwasahlobo, nguHadesi, uthixo wokufa. ULore Olympus Uqale ukupapasha izavenge zeveki nge-Matshi 2018 kwi-WEBTOON, kwaye uthotho luye lwashukuma njengodumo njengeyona comic ithandwayo kwi-WEBTOON enezigidi zeembono, amagama abo batyunjelwe ukugqwesa kumakhomikhi yi-Eisner Awards kunye neeRingo Awards, kunye nevolumu epapashiweyo kunye nomdlalo kamabonwakude elundini phaya. Kwanele ukuthi, ULore Olympus ibabambe ngokupheleleyo abafundi banamhlanje.
Ukuthandwa kwe ULore Olympus Akumangalisi nje ukuba uthathe imizekeliso emangalisayo kaSmythe kunye noyilo lwabalinganiswa. Mfundi Othandekayo, ezi zithixo ziyatshisa. Amabali e-Steamy okulangazelela ahlala eyintandokazi yokufunda, kodwa ULore Olympus inika ubuhle obungaphezulu kolusu olunzulu. U-Smythe ubangela ukufezekiswa kwe-Olimpiki kunye nabalinganiswa abaphantsi kakhulu kwaye banokubuyiseka. Oothixo noothixokazi bamaGrike bahlala benesiphene, kodwa uSmythe ubanika ubuntu-ngakumbi xa kufikwa kwiHadesi kunye nePersephone.
Masingagungqi ngamagama-intsomi yantlandlolo yamaGrike eHadesi kunye nePersephone libali lokuxhwila, ukunyanzela umtshato, nako konke ukungathandeki okubandakanya. Iinguqulelo ezahlukeneyo zentsomi zibonisa umtshato weHadesi kunye nePersephone kwibala elothusayo nelibuhlungu ekuyekeni emsebenzini. Inkolelo yenkolo yaseSicilian ejikeleze uDemeter kunye noothixokazi uKore (elinye igama lePersephone) bajonge kwisithixokazi sentwasahlobo njengophawu lokuzala, isini, kunye namandla omfazi ngaphezulu kwendlu yakhe. I-Persephone, kule nkolelo, ikhumbuze abafazi abatshatileyo ngamandla abawabambayo emakhayeni abo nakubayeni babo. Izikhokelo ezininzi kuseto lweSmythe kunye nokubalisa kuyo ULore Olympus yalatha kwimvelaphi yeSicilian yePersephone njengeyona nto iphambili ekwaziseni ngesicatshulwa.
Nangona kunjalo, akunakwenzeka ukuba uxoxe ngebali leHadesi kunye nePersephone ngaphandle kokuxoxa ngokwenzakala, ukuhlaselwa, kunye nokuxhwilwa, kwaye uSmythe uyakujongana noku ngobuchule nangokuzolileyo emsebenzini wakhe. Ngelixa ukubalisa kwakhe ngeentsomi zeHadesi kunye nobudlelwane bePersephone njengezothando, uSmythe usebenzisa ubuninzi bezinto ezinengxaki kwiintsomi zamaGrike ukubuyisa ibali leHadesi kunye nePersephone kwaye asebenzise isibini (kunye nabalinganiswa abanemibala yeOlimpiki) ukuthetha ngqo Imiba yomothuko kunye nokubonelela ngokunyanga kunye nokuvalwa kwabalinganiswa kunye nabafundi bayo.
Imfazwe ye-mtg ye-trailer ye-spark
Njengoko intsomi yeHadesi kunye nePersephone ibonwa ngokwasentsomini njengentsomi ebandakanya ukuhlaselwa ngokwesondo, yeyona ndawo isengqiqweni ukuqala. Enye yezona ntambo zibaluleke kakhulu kuyo yonke i-comic kukudlwengulwa kwePerphone ngethixo yelanga uApollo. Kwi ULore Olympus , I-Persephone yaziswa njengebhinqa eliselula elikhuselekileyo elingena ikholeji kunye nehlabathi elikhulu le-Olimpiki emva kokuchitha ubomi balo phantsi kokhuseleko lukanina, uDemeter. Umlingiswa wePerphonephone unobubele kwaye uyathemba, ukuba akayena u-naïve omncinci, kwaye u-Apollo uyamthanda. Ukuthabatheka kwakhe kuphelela kuhlaselo ngokwesondo, apho afota khona ukuhlangana ngaphandle kwemvume yePersephone kwaye asebenzise obo bungqina ukumgcina ethe cwaka.
Eli bali linzima kakhulu ukuba lifundwe kwaye lichukumise uninzi lwazo Lore Olympus ' abafundi. Ngale ndlela yokucinga kwakhona ngentlungu yePersephone, uSmythe ubamba ithuba lokubonisa indlela iPersephone ekwazi ngayo ukoyisa ukuhlaselwa kwakhe kunye nokubuyisa ubomi bakhe nokuza ngamandla akhe. I-comic ihamba kamnandi kumfundi kwiindawo eziphakamileyo kunye nokubuyiswa kwePerphone, njengoko elwa nemfihlo yakhe kwaye emva koko akhethe ukungawuthwali yedwa loo mthwalo kwaye azityand 'igila kubahlobo abasenyongweni.
Kwangelo xesha linye ukuba uyachacha ekubetheni kwakhe, ubeka imida esempilweni kunye nembeko kubudlelwane bakhe neHadesi. Ngexesha leli nqaku, uhlaselo alwaziwa kubo bonke abalinganiswa, kwaye loo nto inentsingiselo kwibali likaSmythe. I-Persephone inayo inkxaso ngokuthe ngqo kwabo abathembele kubo. Ukwafunda ukuhamba kwiindawo ezikhuselekileyo zemvume kunye nokuthembela njengosindileyo, ngaphandle kwemfuneko yokuba kufuneka abelane ngeenkcukacha zokukhathazeka kwakhe nabo angakulungelanga ukukutyhilela. Zininzi iinzame zokubamba amava amaxhoba oxhatshazo ngokwesondo, kwaye bambalwa abawenzayo ngovelwano njengoSmythe.
IHayidesi, ekuguqukeni kwakhe ekuthabatheni umyeni abe liqabane elithantamisayo nelinothando, naye akukho mntu ungaziwayo ekuphatheni gadalala. Ngokuhambelana ne-Persephone's naiveté, isimilo seHayidesi siphawulwa yimbali yomothuko obangele umonakalo omkhulu. IHayidesi yayixhoba lokuxhatshazwa nokulahlwa ngumzali, wasinda emfazweni, kwaye wanyamezela ubudlelwane obungenaluthando ngaphambi kokuthandana noPerphone.
super smash bros melee ikhonsoli ebonakalayo
IHayidesi luphawu lwendalo kumava ePersephone kuba ukwenzakala kwakhe kubonakalise ukuzithemba okuphantsi kunye nomnqweno wentshabalalo wokuzihlaziya ngokukhetha abantu yena uyacinga uya kumamkela, kodwa ngubani omenzakalisayo. I-Persephone, kwelinye icala, ayivumeli ukonzakala kwakhe ukuba kubonakale ngeendlela zokuzenzakalisa, kodwa uyasokola ukugcina ubuso obukhaliphile.
U-rick kunye nodaka basisiyatha
Ngokudibeneyo, iHadesi kunye nePersephone zizisa amava abo kwimbono enye yokubuyela kwimeko yesiqhelo. IHayidesi kufuneka ifunde ukubeka phambili iimfuno zakhe kwaye ahlukane nemijikelezo yokuxhatshazwa ephawule ubomi bakhe. Ufunda ukwenza oku ngokwamkela uthando lokwenene kunye nobubele uPersephone abonisa kuye. I-Persephone kufuneka ixhomekeke kubulumko bamava eHadesi kwaye ivumele ukuba ixhomekeke kuye, naxa inqwenela ukujongana nokubuyiswa yodwa.
Ubudlelwane beHadesi kunye nePersephone, kwi ULore Olympus , yakhelwe ekuthantamiseni, ekuhloniphaneni, ekuvunyelaneni, nasekuvunyelaneni omnye nomnye ukuvumela indawo yokukhula kunye nokunyanga. Kuphawuleka kakhulu ukuba iarc kunye nokubuyiselwa kwayo ayisiyiyo ngqo kwaye ilungile. Inxalenye yolawulo lukaSmythe ekuchukumiseni ezi zihloko zibuthathaka yile konke Abalinganiswa bakhe bafumana amava.
IHadesi isajamelene nengqondo yakhe. I-Persephone ikwazi ukumelana nokwenzakala kwakhe ngeendlela ezingenampilo. Abathandi bayakopa, abahlobo abasemva, kunye nokuthembana kwaphulwe. Yonke isamente ye ULore Olympus Abalinganiswa babonisa ukubonwa okupheleleyo kwemicimbi yezempilo yengqondo emikhulu nakwincinci. Yinto enika yona ULore Olympus isibheno sayo esikufutshane.
Iintsomi zamaGrike zikwazile ukubamba iingcinga zethu ukusukela kwiintsuku zokuqala zobuntu. Ihlabathi leOlimpiki lihlala linikezela ukuqonda kwimibuzo esingenazo iimpendulo kuyo kwaye sinika iingcebiso kunye nezilumkiso kwabo beva amabali. ULore Olympus ilungile ngokuhambelana nesiko, kodwa ngombono owandisiweyo womzuzu ophambili. USmythe uzimisele ukulungisa okungalunganga kwimbali yakudala kwaye unikezela abaphulaphuli ithemba eliza nokuphindwaphindwa kwebali elifana neHadesi kunye nePersephone. Ubomi obudlamkileyo bunokukhula buphume ezinzulwini zobumnyama. Ukususela kumaxesha ethu amnyama, sinokukhula sibe yinto entle ngakumbi kwaye enamandla.
(imifanekiso: URachel Smythe / WEBTOON)
Amarhamncwa Amancinci 2019
Sala Kakuhle Birdie
brandy abagcini Galaxy 2
abagcini bethala lesithathu
iiklasi zezixhobo zamandla ezikufuphi nam
kutheni imivundla intle kangaka
Umfuziselo womlilo usiya kwisikolo esona sigqwesileyo
isibini esabelana ngesondo ngelixa lokubhabha